မက်ဆီ ၊ ရိုနာဒို တို့အတွက် ချန်ပီယံလိဂ် အိပ်မက်တွေ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ် မဲခွဲပွဲ က ထူးခြားချက်များ - SPORTS MYANMAR
မက်ဆီ ၊ ရိုနာဒို တို့အတွက် ချန်ပီယံလိဂ် အိပ်မက်တွေ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ် မဲခွဲပွဲ က ထူးခြားချက်များ
ဘောလုံး လောကရဲ့ ပြယုဂ် ကစားသမား နှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ နဲ့ ရိုနာဒို တို့ဟာ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလားကြီးကို ဘယ်လောက် အထိ သိမ်းပိုက်နေချင်ကြလဲ ဆိုတာ ပရိသတ်တိုင်း သိထားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
ဂျူဗီ ဟာ သူတို့နဲ့ ဝေးကွာတာ ကြာမြင့်လွန်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကြီးကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နိုင်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရိုနာဒို ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး အမြောက်အများ ပေးပြီး ခေါ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်သလို ၊ လီယို မက်ဆီ ကလဲ ဘာစီလိုနာ ပရိသတ်တွေ အတွက် ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကြီး ကို ပြန်လည် ရယူပေးမယ့် အကြောင်း ကတိပေးထားတာ2ရာသီတောင် ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
ဒီညနေမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့် မဲခွဲပွဲ နဲ့ ဆီမီး မဲခွဲပွဲတွေ အရတော့ သူတို့ နှစ်ယောက် ရဲ့ အိပ်မက်2ခုစလုံး ဟာ ဗိုလ်လုပွဲ အထိ ရှင်သန်ခွင့် ရမှာ မဟုတ်တော့ပဲ ၊ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်မှာတင် တစ်ယောက် က လက်လွှတ်သွားရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ကွာတား ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်များ
1. ရီးရဲ/မန်စီးတီး – လီယွန်/ဂျူဗီ
2. လိုက်ပ်ဇစ် – အေတီကို
3. နာပိုလီ/ဘာကာ – ချဲဆီး/ဘိုင်ယန်
4. အတ္တလန္တာ – ပီအက်စ်ဂျီ
ဆီးမီး ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်များ
• ကွာတား ဖိုင်နယ် 1 (နိုင်) – ကွာတား ဖိုင်နယ်3(နိုင်)
• ကွာတား ဖိုင်နယ်2(နိုင်) – ကွာတား ဖိုင်နယ်4(နိုင်)
အထက် ဖော်ပြပါ မဲခွဲပွဲ ရလာဒ်တွေ အရတော့ ရိုနာဒို ဟာ သူ့ရဲ့ အသင်းဟောင်း ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှုတွေ ရှိလာနိုင်သလို ၊ ဆီမီး ဖိုင်နယ် အဆင့်မှာလဲ မဟာပြိုင်ဘက်ကြီး မက်ဆီ နဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရဖို့ အခွင့်အရေး ရှိနေပြန်ပါတယ်။
အဲဒီ လမ်းကြောင်းဟာ ဗိုလ်လုပွဲ ကို တက်ရောက်လာဖို့ အတွက် ခက်ခဲလွန်းတာကြောင့် မရဏ လမ်းကြောင်းလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ ရီးရဲ /မန်စီးတီး/ဂျူဗီ/ချဲဆီး/ဘိုင်ယန်/ဘာကာ တို့ အသင်းတွေထဲက တစ်သင်းသာ ဗိုလ်လုပွဲ ကို တက်ရောက်ခွင့် ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ တစ်ဖက်မှာတော့ အေတီကို နဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ တို့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
• 2006 ကနေ 2019 ခုနှစ် အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ 14 ရာသီမှာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ဟာ 8 ကြိမ် အထိ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် သမိုင်းကြောင်းမှာ ဘယ်တော့မှ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ပြီး ဗိုလ်လုပွဲ မကစားဖူး ပါဘူး။ ဒီရာသီမှာလဲ ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိတော့ပါဘူး။
• လိုက်ပ်ဇ် ဟာ အေတီကို နဲ့ တစ်ခါမှ ရင်ဆိုင် မကစားဖူး သလို ၊ အတ္တလန္တာ ကလဲ ပီအက်စ်ဂျီ နဲ့ တစ်ခါမှ ထိပ်တိုက် မတွေ့ဖူးပါဘူး။
• သို့သော် အေတီကို ဟာ ဂျာမန် ကလပ်တွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့် နောက်ဆုံး 8 ကြိမ်မှာ ၊ အားလုံးကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်ဖြတ် ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
• PSG ကတော့ အီတလီ ကလပ်တွေ နဲ့ နောက်ဆုံး တွေ့ခဲ့တဲ့ 8 ပွဲမှာ တစ်ပွဲမှ အနိုင်မရပဲ6ပွဲ သရေ ကျကာ ၊2ပွဲ ရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်။
• ဘိုင်ယန် နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ နောက်ဆုံး ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့3ကြိမ် မှာ ၊ အနိုင်ရတဲ့ အသင်းဟာ ချန်ပီယံ သရဖူ ဆုကို ဆွတ်ခူးထားတဲ့ အထိ အောင်မြင်ထားပါတယ်။
• မန်စီးတီး အနေနဲ့ လီယွန် နဲ့သာ တွေ့ဆုံခဲ့မယ် ဆိုရင် ပေါ့ဆလို့ မရပါဘူး။ လီယွန် ဟာ မနှစ်က ကမှ သူတို့ နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ဆုံထားတဲ့ အသင်းဖြစ်ပြီး ၊ အုပ်စု အဆင့်မှာ 1 ပွဲ နိုင် ၊ 1 ပွဲ သရေ ကစားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ် လ 7-8 ရက် တွေ မှာ ရှုံးထွက်အဆင့် ဒုတိယ အကျော့ ပွဲစဉ်တွေ စတင် ကစားမှာပါ။
သြဂုတ် လ 12-15 ရက် အတွင်းမှာတော့ လစ္စဘွန်း တစ်နေရာထဲမှာ ၊ ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်တွေ ကို ကစားမှာပါ။
သြဂုတ် လ 18-19 ရက် တွေမှာ လစ္စဘွန်း တစ်နေရာထဲမှာပဲ ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်တွေ ကို ကစားမှာပါ။
နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲ ကိုတော့ 23 ရက်နေ့မှာ ကစားမှာပါ။ (ပွဲစဉ် အားလုံးဟာ တစ်ကျော့ထဲ ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒီနှစ် အတွက် ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလားကြီးကို ဘယ်အသင်းက သိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့ ထင်လဲဗျာ………..
မကြာမီ အသင်းဖော်သစ် ၂ဦး ဖြစ်လာတော့မယ့် ဇီယက်ချ် နဲ့ ဗာနာ တို့ အပေါ် အသီးသီး မှတ်ချက် ပေးခဲ့ကြတဲ့ ရူဒီဂါ နဲ့ ကီပါ
အကြာကြီး နားရတော့မယ့် ဟန်ဒို နဲ့ ဂယ်လ်မာ ၊ နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ
“လီဗာပူးကို နိုင်ခဲ့တာက ဒီညပွဲအတွက် အထောက်အကူ မဖြစ်ပါဘူး” – ဒီယေဂို ဆီးမြွန်းနီ
အမ်ဘာပေ နဲ့ နေမာ တို့ နှစ်ယောက် စလုံးက ဘယ်တော့မှာ PSG ကနေ ထွက်ခွာမှာ မဟုတ်ပါဘူး #အယ်ခီလာဖီ
Comeback နိုင်ပွဲ နဲ့ ဆီမီး တက်ခဲ့ပြီးနောက် အသင်းဖော်တွေရဲ့ တိုက်ပွဲဝင် စိတ်ဓာတ် အပေါ် ချီးကျူး ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #နေမာ